Vaovao - Torohevitra hampihenana ny herinaratra mijanona amin'ny akanjo baoty
Rehefa mitafy sy manaisotra ny akanjo ba mafana, manao fifandraisana ara-batana amin'ny hafa, na mikasika zavatra vy tsy nahy, dia matetika no mivoaka tampoka. Mety mahita vainafo aza amin'ny rivotra. Tsy ny tananao ihany no ho maratra, fa ny herinaratra mijanona matetika sy ny fivoahana koa dia hisy fiantraikany amin'ny asa sy ny fiainanao mahazatra.
Ny sweater dia mirona amin'ny herinaratra mijanona, satria ny hoditsika, ny fitafiana hafa ary ny akanjo lava mifampikasoka sy mifanosihosena, indrindra rehefa mitafy na manala akanjo, dia miangona tsikelikely ny herinaratra mijanona. Rehefa miangona amin'ny ambaratonga avo dia avoaka indray miaraka, ary hitranga ny fivoahana.
Esory ny herinaratra miorim-paka izay nateraka tamin'ny akanjo bazaina: Alohan'ny hametrahana sy hanaisotra ny akanjo ba, dia ampiasao zavatra metaly hikasika ilay akanjo lava. Na manaova brooch metaly hitarika herinaratra mijanona entin'ny akanjo ba.
Aza atao akanjo ba vita amin'ny kofehy simika, satria ny fifandirana eo amin'ny kofehy simika sy ny vatanao dia mety hiteraka herinaratra mijanona. Manaova kiraro hoditra mihoatra ny kiraro fingotra, satria ny fitaovana vita amin'ny fingotra dia misoroka ny fandefasana sarany herinaratra, mitarika fiangonan-karena.
Ahenao ny famokarana herinaratra mijanona amin'ny akanjo baoty: mividiana malefaka na famafazana volo ary atsofohy amin'ny akanjo lava mba hisorohana ny herinaratra mijanona. Satria ny manalefaka dia afaka mampitombo ny hamandoan'ny akanjo ba, ary ny famafazana volo dia mampihena ny herinaratra mijanona. Na mampiasa lamba famaohana izay mamafy tsara ny rano ary lena amin'ny rano hamafana ilay akanjo ba. Arotsaho kely ny akanjo mafana mba hampihenana ny haavon'ny fahamainan'ny akanjo ba ary hampihena ny famokarana herinaratra mijanona.
Hatsarao ny fomba fanasana akanjo mafana: ampio soda, vinaingitra fotsy na mpanalefaka rehefa manasa akanjo ba. Izy io dia afaka manalefaka ny akanjo, mampihena ny fahamainan'ny fitaovana ary manampy amin'ny fampihenana ny herinaratra mijanona.
Ampitomboy ny hamandoan'ny tontolo iainana: Rehefa maina ny andro, dia tsy mora afindra amin'ny rivotra ny vidin'ny herinaratra miangona. Azonao atao ny mampiasa moisturizer hampitombo ny hamandoana amin'ny rivotra, na hametraka servieta lena na rano iray vera amin'ny heater mba hisy vokany mitovy amin'izany.
Afangaroy ny hoditra: asio moisturizer ny faritra amin'ny hoditra izay mifandray amin'ny akanjo lava na volo mora vonoina ary ravina taratasy manify. Tsy ny hoditra ihany no azo tazomina amin'ny ririnina maina, fa na dia mifandraika amin'ny akanjom-pataloha aza ny hoditra mihosotra, tsy mora ny mamokatra herinaratra mijanona.